ပန်းခြံတစ်ခုဖြစ်သော Hillier Lake တွင်နှစ်မြှုပ်ပါ Absolut ခရီးသွား
Isabel | | ၾသစေတးလ်
ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘယ်သောအခါမျှအံ့သြလောက်အောင်မပျောက်ကွယ်စေနိုင်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာရေတောက်တောက်နေတဲ့ရေကန်ရှိတယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိလား။ ၎င်းသည်Hillစတြေးလျနိုင်ငံ La Recherche ကျွန်းစုရှိအကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်သောအလယ်ကျွန်းပေါ်ရှိလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောသဘာဝရင်းမြစ်ဖြစ်သော Hillier Lake ဖြစ်သည်။
Hillier Lake တည်ရှိရာနေရာကိုသွားရန်မလွယ်ကူပါ။ လူအများစုက၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့မြင်ရန်အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများကြောင့်သင်အများစုသည်ကျွန်းကိုကျော်။ သာလျှင်အိုင်သာစတာ့ဗ်လေဆိပ်မှနေ့စဉ်ထွက်ခွာသည့်ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှရေကန်ကိုမြင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ အနာဂတ်တွင်သင်သည်သြစတြေးလျသို့လှပသောရှုခင်းများ၊ သဘာဝနှင့်နေရာများကိုသိလိုလျှင်သွားလိုလျှင် Hillier ရေကန်ထိုအခါငါဤလှပသောပန်းရောင်ဂွိုအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
1 Hillier ရေကန်ကဘာလဲ?
2 Hillier ရေကန်ကိုဘယ်သူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သလဲ။
3 Hillier Lake ကိုဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သလဲ။
4 Hillier Lake ရှိရေသည်အဘယ်ကြောင့်ပန်းရောင်ဖြစ်သနည်း
5 Hillier Lake ကိုဘယ်လိုလည်ပတ်မလဲ
6.1 ကလီကို့စ်အိုင် (စပိန်)
6.2 Kelimutu Lakes (အင်ဒိုနီးရှား)
6.3 Moraine ရေကန် (ကနေဒါ)
6.4 Natron ရေကန် (တန်ဇန်းနီးယား)
Hillier Lake သည်အလယျပိုငျးကျွန်းရှိအမြင့် ၆၀၀ မီတာရှည်သော bubblegum ပန်းရောင်အိုင်ဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျအနောက်ပိုင်းရှိ La Recherche ကျွန်းစုတွင်အကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်သည်, ခက်ခဲ access ကိုအတူတောတွင်းinရိယာ၌တည်၏။ ၎င်းသည်၎င်း၏ရေ၏ထူးခြားသောအရောင်ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျော်ကြားလာပြီး၎င်းကိုအလွန်ပုံဖော်။ မရသောအရာများဖြစ်လာသည်။ အံ့သြဖွယ်အမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံ!
သြစတြေးလျရှိ Hillier Lake ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် ဗြိတိန်မြေပုံရေးဆွဲသူနှင့်ရေကြောင်းသမားမFlဲဖလင်ဒါးကပြုလုပ်သည် XVIII ရာစု၌။ ကြီးမားသောသြစတြေးလျကျွန်းတစ်ကျွန်းသို့ပထမဆုံးလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ကျော်ကြားသောကျော်ကြားသူနှင့်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောရှာဖွေရေးစာပေများကိုရေးသားသူရှာဖွေသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အများစုသည် Oceania သို့ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အစွန်းရောက်ဆုံးနှင့်လှပသောသဘာဝသဘာ ၀ ကွာခြားမှုအချို့ရှိသောအတွင်းပိုင်းရှိတိုက်ကြီးတစ်ခု။
Hillier Lake ကိုဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သလဲ။
အလယျပိုငျးကျွန်းသို့လေ့လာရေးခရီး၏နေ့၌, သူသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အမြင့်ဆုံးတောင်သို့တက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်သူ၏မျက်မှောက်၌ပေါ်လာသောမယုံနိုင်စရာပုံရိပ် - သဲနှင့်တောအုပ်များဝိုင်းရံထားသောကြီးမားသောပန်းရောင်ရေကန်အိုင်၏အံ့သြသွားသည်။
နောက်ထပ်ရဲရင့်သောစူးစမ်းရှာဖွေသူတူးဖော်ရေးသင်္ဘောမှူး John Thistle ကသူမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရာသည်အမှန်တကယ်လား၊ သူချဉ်းကပ်လာသောအခါသူအလွန်အံ့အားသင့်သွားတယ် Hillier ရေကန်မှရေနမူနာကိုယူပါ ကျန်အပေါင်းပါများအားပြသရန် ရေကန်ထဲမှတောင်မှ၎င်း၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသော bubblegum ပန်းရောင်အရောင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ
Hillier Lake ရှိရေသည်အဘယ်ကြောင့်ပန်းရောင်ဖြစ်သနည်း
၎င်းသည် Hillier Lake ၏နက်နဲသောအရာဖြစ်သည် ၁၀၀ ရာနှုန်းကိုမည်သူမျှထုတ်ဖေါ်ပြသခြင်းမရှိခြင်းသည်၎င်း၏ရေသည်ပန်းရောင်ရှိရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ သုတေသီအများစုကဆား၏အပေါ်ယံလွှာရှိဘက်တီးရီးယားများကြောင့်ကန်တွင်ဤအရောင်ရှိသည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ အခြားသူများကမူအကြောင်းရင်းမှာ Halobactoria နှင့် Dunaliella salina တို့ရောနှောနေသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ သိပ္ပံနည်းကျသဘောတူညီမှုမရရှိသေးပါ။
Hillier Lake ကိုဘယ်လိုလည်ပတ်မလဲ
Hillier Lake သည် La Recherche ကျွန်းစုရှိအကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်သော Middle Island တွင်တည်ရှိသည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ လက်လှမ်းမှီမှုအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး ဤရေကန်သို့အလည်အပတ်ခရီးကို Esperance လေဆိပ်မှရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်သာပျံသန်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စျေးကြီးသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအတော်လေးအတွေ့အကြုံလည်းရှိသည်။
ပုံရိပ် ဝီကီပီးဒီးယားအတွက် Rauletemunoz
မီချီဂန်၊ တိုစ်ကာကာ၊ တန်ဂနီယာကာ၊ ဗစ်တိုးရီးယားနှင့်ဘိုင်ကလီကဲ့သို့သောရေကန်များသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးရေကန်များဖြစ်သည်။
သို့သော်တိုက်ကြီးများအားလုံးတွင်မူ ၄ င်းတို့၏မူလထူးခြားချက်များကြောင့် ၄ င်းတို့၏ရေဖွဲ့စည်းမှု၊ ၎င်းတို့အပေါ်မြင့်မားသောအပူချိန်၏သက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ်၎င်းတို့နှင့်နေထိုင်သောသက်ရှိများကြောင့်အလင်းရောင်နည်းပါးသောအခြားနည်းသောရေအောက်များလည်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်, ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပတ်လည်တွင်လည်ပတ်ရန်ထိုက်တန်သောလှပသောအရောင်အမျိုးမျိုးရှိသောရေကန်များရှိသည်။
စပိန်တွင် Hillier နှင့်အလွန်ထူးခြားသောရေကန်လည်းရှိသည် ၎င်း၏ရေသည်ပန်းရောင်တောက်ပသော်လည်းမြမြအစိမ်းရောင်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် Clicos ရေကန်အဖြစ်လူသိများပြီး Los Volcanes ၏သဘာဝဥယျာဉ်အတွင်းရှိ Yaiza (Tenerife) ၏အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်တည်ရှိသည်။
အရာ ၀ တ္ထုအများစုသည်ဆိုင်းငံ့ထားသောကြောင့်၎င်းлагунуထူးခြားစေသည်။ Clicos ၏အိုင်ကိုသဲသောင်ပြင်ဖြင့်ပင်လယ်နှင့်ခွဲထားသည် နှင့်မြေအောက်အက်ကြောင်းအားဖြင့်ကချိတ်ဆက်။ ၎င်းသည်အကာအကွယ်ပေးထားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ရေကူးခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။
Kelimutu Lakes (အင်ဒိုနီးရှား)
အင်ဒိုနီးရှားမှာ Flores ကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ် Kelimutu မီးတောင်ရေကန်သည်အရောင်ပြောင်းသောရေကန်သုံးခုရှိသည်။ စိမ်းမှသည်အနီရောင်အထိအပြာနှင့်အညိုရောင်မှသည်။ မယုံနိုင်စရာလား မီးတောင်၏အတွင်းပိုင်းမှထွက်လာသောဓာတ်ငွေ့များနှင့်အငွေ့များပေါင်းစပ်။ အပူချိန်မြင့်တက်လာသောအခါကွဲပြားခြားနားသောဓာတုဓာတ်ပြုမှုများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကြောင့်၎င်းသည်မြင်တွေ့ရသင့်သောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တက်ကြွသောမီးတောင်ဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံး Kelimutu မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုသည် ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ၂၀ ရာစုအကုန်တွင်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏အမျိုးသားဥယျာဉ်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။
Moraine ရေကန် (ကနေဒါ)
Alberta's Banff အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် Moraine ရေကန်ရှိပြီး လှပသောရေခဲများမှနွေးလာသည့်လှပသောရေခဲမြစ်များလှပသောလှိုင်ဂူဖြစ်သည်။
၎င်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလွန်အထင်ကြီးလေးစားဖွယ်ရှိပြီး၎င်းသည်တောင်ထိပ်၏ချိုင့်ဝှမ်းရှိiesရာမကျောက်တောင်များဖြင့်ဝန်းရံထားသည်။ ဤအထောက်အထားများဖြင့်တောင်တက်သမားများသည် Moraine ရေကန်သို့လာရောက်ကြည့်ရှုကြသည်။ နေရောင်ခြည်သည်အိုင်ထဲသို့တိုက်ရိုက်ထိသောအခါတစ်နေ့တာအတွင်း၎င်း၏ရေသည်ပိုမိုပြင်းထန်လာသည် နံနက်ယံ၌၎င်းကိုတွေ့မြင်ရန်သွားသင့်သည်, ရေပိုမိုပွင့်လင်းပုံရသည်နှင့်ကရှုမြင်သုံးသပ်ကြရသောလှပသောရှုခင်းကိုထင်ဟပ်သောအခါ။
အပြင် ရေတိမ်အိုင်Banff အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် Peyton နှင့် Louise ရေကန်များလည်းလှပသည်။
Natron ရေကန် (တန်ဇန်းနီးယား)
တန်ဇန်းနီးယားနှင့်ကင်ညာနိုင်ငံနယ်စပ်တွင်တည်ရှိသည်။ Natron ရေကန် ၎င်းသည် Great Rift Valley အထက်တွင်ရှိသောကုန်းတွင်းပိတ်ပင်လယ်ရေအိုင်ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတောင်များမှအိုင်ထဲသို့စီးဝင်သောဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ်နှင့်အခြားဓာတ်သတ္တုဒြပ်ပေါင်းများကြောင့်၎င်း၏အယ်ကာလိုင်းရေများသည် pH ၁၀.၅ ရှိသည်။ ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ်နှင့်အခြားဓာတ်သတ္တုဒြပ်ပေါင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် caustic ရေဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ချဉ်းကပ်သောသတ္တဝါများ၏မျက်လုံးများနှင့်အရေပြားကိုပြင်းထန်စွာလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အဆိပ်ကြောင့်သေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ရေကန်ရေကန် တိုင်းပြည်အတွင်းသေဆုံးမှုအမြင့်ဆုံးခေါင်းစဉ်နှင့်အတူမြင့်တက်လာခဲ့သည်။
သို့သော်ပြင်ပအသွင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ ဤဂွသည်အယ်ကာလိုင်းဆားအသုံးပြုသောအပေါ်ယံလွှာတွင်နေထိုင်သောသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများကြောင့်ထူးခြားသောအနီရောင်သို့မဟုတ်ပန်းရောင်အရောင်များ၊ အောက်ပိုင်းဒေသများရှိလိမ္မော်ရောင်ပင်များကိုရရှိသည်။ အံ့သြစရာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ပန်းခြံတစ်ခုဖြစ်သော Hillier Lake တွင်နှစ်မြှုပ်ပါ